Fahamarinana – Athis Fanantenana
MOFON’AINA TALATA 23 JONA 2020
Ary tonga tamin’i Zakaria ny tenin’i Jehovah nanao hoe: 9 Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro:…
MOFON’AINA TALATA 09 JONA 2020
9 jona 2020
Fahamarinana, Fatahorana an'Andriamanitra
Avia, anaka, mihainoa ahy; ny fahatahorana an’i Jehovah no hampianariko anareo….
MOFON’AINA ALAROBIA 01 AVRILY 2020
1 aprily 2020
Satroboninahitry ny hendry ny hareny; Fa ny fahadalan’ny adala dia fahadalana ihany…
MOFON’AINA ALAKAMISY 07 NOVAMBRA 2019
7 novambra 2019
Aza avela hisy tsy voaloa na amin’iza na amin’iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany;…
Izao no teny tonga tamin’i Jeremia avy tamin’i Jehovah: 2 Mitsangàna eo am-bavahadin’ny tranon’i Jehovah,…
Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin’ ny mpanao ratsy; Ary aza mialona ny mpanao meloka;…
MOFON’AINA ALAKAMISY 25 OKTOBRA 2018
Raha misy lehilahy vao nampaka-bady, dia tsy handeha hiantafika izy,…
MOFON’AINA ALATSINAINY 15 OKTOBRA 2018
Anaka, aza avela hisy hamitaka anareo: izay manao ny marina no marina;…
14 Ary ny Fariseo dia lasa nivoaka ka niara-nisaina mba hahafaty Azy.15 Fa Jesoa nahalala izany, ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka Azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra;16 ary nandrara azy Izy tsy hanao izay hahafantarana Azy,17 mba hahatanteraka izay nampilazaina an’ Isaia mpaminany hoe:18 Indro ny Mpanompoko, Izay nofidiko, Ny […]